मलेसियामा सम्पर्कविहीन प्रदीपलाई खोजिदिन परिवारको आग्रह – " कञ्चनजंगा News "
मलेसियामा सम्पर्कविहीन प्रदीपलाई खोजिदिन परिवारको आग्रह
No Comments on मलेसियामा सम्पर्कविहीन प्रदीपलाई खोजिदिन परिवारको आग्रह
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीका लागि मेलसिया गएका प्रदीपकुमार चौधरीलाई खोजिदिन परिवारले आग्रह गरेको छ। वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै उदयपुर जिल्ला चौदण्डीगढी नगरपालिका–५ सुन्दरपुरका चौधरीलाई खोजिदिन परिवारले आग्रह गरेको हो।
२०७४ साल मंसिर ४ गतेबाट प्रदीप घर परिवारसँग सम्पर्कविहिन भएका थिए। बसुन्धरास्थित पिजन ओभरसिज प्रालिबाट मलेसिया गएका उनी मलेसियाको डब्ल्यू. सीटी कन्स्ट्रक्सन एसडीएन विएचडी कम्पनीमा कार्यरत थिए। उनी कम्पनीमा तीन बर्षे कार्यकाल पूरा गरेर पुनः सोही कम्पनीमा काम गर्न मेलेसिया गएका थिए। पछिल्लो पटक गएको केही समयसम्म सम्पर्कमै रहेका उनी एक्कासी सम्पर्कविहिन भएको बुबा सिताराम चौधरीले जानकारी दिए। घरमा सम्पर्क गर्न छाडेपछि उनको खोजि कार्य सुरू गरिएको तर अहिलेसम्म उनी नभेटिएको उनकाे भनाइ छ । यस क्रममा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा समेत निवदेन दिएको उनले बताए।
बोर्डले पहल गर्दा मेलेसियाका जेल र सेल्टरमा प्रदीपकुमार चौधरी नामको कुनै पनि व्यक्ति नरहेको जानकारी दिएको बुबा सितारामले बताए । त्यसैगरी मलेसियामै काम गर्ने उदयपुरका एकजना शुभचिन्तकको सहयोग मलेसियामा कार्यरत कम्पनीमा बुझ्न पठाउँदा उनी त्यहाँ नरहेको कम्पनीको गार्डले जानकारी दिएको बताए। प्रदीप ८/१० महिनादेखि नै कम्पनी छाडेर अन्यत्र गएका कम्पनीका गार्डलाई उदृत गर्दै बुबा सितारामले जानकारी थिए । मलेसिया पुगेको केही समयसम्म आफूसँग फोन सम्पर्कमै रहेको उनकी श्रीमती कुन्तीदेवी चौधरीले जानकारी दिइन्। घर परिवारसँग सम्पर्क नै विच्छेद हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको पनि उनले बताइन्।
‘घरपरिवार र कसैसँग झगडा र नराम्रो पनि भएको थिएन।’ उनले भनिन, ‘परिवार, आफन्त, शुभचिन्तक र साथीभाई सबैसँग एक्कासी सम्पर्क विच्छेद भएपछि हामी सबै चिन्तित भएका छौं। फेसबुक म्यासेन्जर र मलेसियामा नम्वरमा इमो भाइवरमा नियमित सम्पर्क भइरहेकोमा सोही मितिदेखि मोवाइल, फेसबुक सबै निष्क्रिय भएको पनि उनले जानकारी दिइन्।
‘न लाश भेटिन्छ न सास, कहाँ हरायो त मेरो छोरा ?’ प्रदीपकी आमा सन्ध्यादेवी चौधरीले भनिन्, ‘नेपाल सरकारका साथै सहयोगीलाई खोज्न आवश्यक सहयोगका लागि अपिल गर्दछु। उनको खोजी कार्यमा आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन नेपाल सरकारका साथै सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारकर्मीहरुसँग पनि परिवारले अपिल गरेको छ । ३२ बर्षे प्रदीप १३ बर्षका एक छोरी र ८ बर्षको एक छोरा छन्।
← होटल याक एण्ड यतिमा प्रहरी छापा, १२ भारतीय नागरिक पक्राउ → आजको राशिफल: वि.सं. २०७६ वैशाख २९ गते आइतबार